देउवा–सिटौलाको पुनर्मिलनले निधीको राजनीति सङ्कटमा - Jhilko
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासँग गरेको भित्री सहमति उजागर भएपछि पार्टीको दुबै पक्षमा हलचल मच्चिएको छ । गत १३ औं महाधिवेशनका क्रममा सभापति पदमा चुनाव जित्न नेता सिटौलाले देउवालाई धेरै मद्दत गरेका थिए । आफूलाई यति ठूलो जोखिममा राखेर सिटौलाले देउवालाई किन सभापति जिताएका होलान् भन्ने चर्चाले त्यतिबेला कांग्रेस वृत्तमा सनसनी मच्चाएको थियो ।
समाचार स्रोतका अनुसार १३ औं महाधिवेशनमा सिटौलाले देउवालाई सभापति जिताउन मद्दत गर्ने र त्यसबापत देउवाले सिटौलालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मद्दत गर्ने, प्रधानमन्त्री बनाउन नसके १४ औं महाधिवेशनमा सभापति बनाउन मद्दत गर्ने सहमति भएको थियो । देउवासँग त्यतिबेला भएको सहमतिलाई सिटौलाले यतिबेला बाहिर ल्याएका छन् । विभाग गठनका विषयमा इतर पक्षले विधान विपरीत भयो भनेर आपत्ति जनाइरहँदा नेता सिटौलाले सभापति देउवाबाट विभाग, केन्द्रीय सदस्य तथा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यमा उल्लेख्य कोटा प्राप्त गरेका छन् ।
यसैगरी नवगठित ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभामा पनि सिटौलाले करिव ३० प्रतिशत भाग पाएका छन् । यस विषयमा सिटौलासँग उनी निकट एक कार्यकर्ताले जिज्ञासा राखेका थिए । ती कार्यकर्ताको जिज्ञासाको जवाफ सिटौलाले यसरी दिएका थिए, ‘त्यतिबेला देउवाजीले साथ नदिएको भए मेरो नाम महामन्त्री पदमा केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन हुन सक्ने अवस्था थिएन, ९ महिनासम्म अनुमोदन हुन नसकेपछि त्यतिबेलै मैले देउवाजीसँग भनेको थिएँ, मेरो नाम अनुमोदन गर्न सहयोग पुर्याइदिनोस्, सुशीलजीको होइन कि, तपाइँकै महामन्त्रीका रुपमा काम गर्नेछु, १३ औं महाधिवेशनमा कुनै हालतमा पनि सभापति पदमा चुनाव जिताइ दिनेछु ।’
१३औं महाधिवेशनका क्रममा देउवासँग सिटौलाले थप सहमति पनि गरेका थिए । केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन गरी आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा सिटौला थिए । यसका लागि देउवा लचक पनि भएका थिए । तर, देउवा पक्षकै अर्का नेता विमलेन्द्र निधीले अर्कै गेम खेले । पहिलो चरणमा आफू गृहमन्त्रीसहित उपप्रधानमन्त्री बन्ने र दोस्रो चरणमा देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने रणनीति निधीले अघि सारे ।
सिटौला प्रधानमन्त्री बनेको अवस्थामा आफु समाप्त हुने जोड घटाउ निधीको रह्यो । यसरी देउवा आफंै प्रधानमन्त्री बनेपछि सिटौला बिच्किए । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका रुपमा निधीलाई असफल गराउन सिटौला जोड बलका साथ लागे ।
आमनिर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ देउवाको साथ छाडेको घोषणा सिटौलाले गरे । जब सिटौलाले साथ छाडे त्यसपछि भएका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संघ/संगठनका कुनै पनि महाधिवेशनमा देउवा पक्षले चुनाव जित्न सकेन । सिटौलाले साथ छाड्दा १४ औं महाधिवेशनमा कुनै पनि हालतमा आफूले सभापति पदमा चुनाव नजित्ने निष्कर्षमा देउवा पुगे । त्यो निष्कर्ष पछि देउवाले केन्द्रीय सदस्य, आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य, विभागीय प्रमुख र ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभा गठन गर्ने क्रममा सिटौलालाई यथेष्ट कोटा दिएका हुन् ।
१४औं महाधिवेशनमा सिटौलालाई सभापतिको उमेद्वार बनाएर आफू बाहिरिने अवस्थामा देउवा छैनन् । देउवा पक्षका अधिकांशले सिटौलालाई सभापति स्वीकार गर्ने सम्भावना छैन । त्यसैले आगामी १४ औं महाधिवेशनमा उपसभापतिलगायत ३३ प्रतिशत पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य सिटौला समूहलाई दिने र आमनिर्वाचन पछि संसदीय दलको नेतासमेत बनाइदिने बचन सभापति देउवाले सिटौलालाई दिएका छन् । तर, संसदीय दलको नेता बनाइदिने कुरा बचनले मात्रै पुग्दैन लिखत सहमति नै चाहिन्छ भनिरहेका छन् सिटौलाले । यसका लागि पनि देउवा तयार हुने बुझिएको छ । देउवा–सिटौलाको यो पुनर्मिलनले उपसभापति निधीको राजनीति सङ्कटमा पर्ने विश्लेषण कांग्रेस वृत्तमा छ ।
यता इतर पक्षमा पनि सभापतिको उमेद्वार रामचन्द्र पौडेल कि महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र नेता डा. शेखर कोइलामध्ये एक ? भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । तीनै जनाले आन्तरिक तयारीलाई तीब्रता दिएका छन् । सिटौला खुलेरै लागेको र इतर पक्षमा दुई चिरा हुने संकेत देखिएका कारण देउवा १३ औं महाधिवेशनको भन्दा पनि बलियो हुने सम्भावना बढेर गएकोे कांग्रेसलाई निकटबाट नियालिरहेका विश्लेषक बताउँछन् । सयमबद्ध साप्ताहिकबाट
शेयरबजारमा कोरोना इफेक्ट, ६ प्रतिशतले घटेपछि बन्द
साग रिपोर्टिङ गर्न रंगशाला पुगेका पत्रकारमाथि प्रहरीको...
मंगलबार १३औं सागको पुरुष फुटबलको फाइनलमा नेपाल र भुटानबीच खेल हुँदैछ । लगतै सागको...
बाढीको त्रासले रातभर जाग्राम
जब वर्षायाम शुरु हुन्छ तब कैलालीका धेरैजसो ठाउँका बासिन्दाको मुटु काँप्छ । उनीहरू...